Umthetho we-SAFE Banking Ohlinzeka Ukutholakala Kwezinsizakalo Zebhange Kumabhizinisi Ahlobene Nensangu. Insangu Acting Banking.
Umthetho Wezimali Wasebhange i-SAFE Ukuhlinzeka Ukutholwa Kwezinsizakalo Zebhange Lamabhizinisi Ahlobene Nezomthetho weCannabis
Ibhizinisi elisemthethweni le-cannabis njengamanje lingenye yezimboni eziqhakaza kakhulu e-United States enegumbi elikhulu lokukhula. Ngo-2017 kuphela, imboni yensangu yaqopha ukuthengiswa kwezigidi eziyizigidi eziyizinkulungwane ezingama-9 zamaRandi lapho kuthengiswa, kanti ukukhula kwezimakethe kulindeleke ukuthi kugasele ama- $ 21 ezigidigidi ngo-2021. Njengamanje, amazwe angaphezu kuka-33 asemthethweni ukusetshenziswa kwalesi sidakamizwa ngezinjongo zokwelapha nokuzilibazisa. , Maine, Massachusetts, Nevada, kanye neSifunda saseColumbia.
Ngenkathi i-cannabis iya ngokuya iba semthethweni, izifundazwe eziningi zisabheka izidakamizwa njengezingekho emthethweni ngokomthetho wenhlangano. Njengoba kunjalo, ukulandela imithetho yezwe kubalulekile uma ufuna ukungena embonini. Osomabhizinisi abahlose ukusungula ibhizinisi elisemthethweni lensangu kumele bahambisane nemithetho nemithetho eyinkimbinkimbi engaguquki.
Kulesi sihloko, sizocubungula ukubhekwa kwezomthetho okubandakanyekile ekusunguleni amabhizinisi asemthethweni ahambelana ne-cannabis, sikhethe uhlobo lwebhizinisi elizibandakanye kulo, kanye nokuthola izinsiza zokuthengiswa kwezezakhiwo kanye nezamabhange ngebhizinisi lelo.
Ukukhetha Ibhizinisi Le-Cannabis Elisemthethweni
Umbuso ngamunye unezinhlobo zamalayisense ezihlukile, kanye nemithetho nemigomo elawula imboni ye-cannabis. Ukuze usebenze noma yiliphi ibhizinisi elihlobene ne-cannis, kufanele uvikele ilayisense kusuka kusimo sakho. Izinhlobo ezintathu eziphambili zemikhakha yebhizinisi insangu zikhona; ukulima, ukuthengisa okuthengiswayo, kanye nokwenza umkhiqizo okhiqizwayo.
Amabhizinisi abamba iqhaza ekulimeni insangu alawulwa kakhulu uma kuqhathaniswa nabalingani bawo. Ukulima insangu kufaka phakathi ukhula, ukomisa, ukuncipha, ukuphulukisa kanye nokufaka umuthi owuthengiselwa kuma-dispensaries noma ezindaweni zokuthengisa. Le misebenzi idinga izinga eliphezulu lobuchwepheshe bezamasiko kanye nemali enkulu yokuqala.
Ibhizinisi lemikhiqizo elifakiwe lifaka ukutholwa kwensangu edliwayo, usawoti, kanye nezicubu zezitho zomzimba ezindaweni ezigunyaziwe futhi lizinikeza ezigulini nakubasebenzisi bezokungcebeleka. Leli bhizinisi libuye lifake nenqubo yokukhipha i-resin kulo muthi nokwakha umkhiqizo owethengiselwe ukuthengiswa, emva kwalokho usomabhizinisi bese edlulisela imikhiqizo efakwe emafomu ahlanganiswe ezitolo ezithengisa kanye nezindawo ezihanjiswa kuzo.
Ukuthengisa okuthengiswa kabusha (okwaziwa nangokuthi amaqoqo noma ama-dispensaries) kubhekiswa ezitolo ezijwayelekile ezisebenzelana nokuthengiswa kwemikhiqizo ehlobene ne-cannabis kubasebenzisi abagunyaziwe bokugcina. Lezi zindawo zithola lo muthi kumlimi noma insiza esebenza ngelayisensi enamalayisense bese ziwunika iziguli namakhasimende afanelekayo. Ukusetha lolu hlobo lwebhizinisi kunzima futhi kuyabiza, kepha imivuzo iba yinzuzo uma iqala ukuqingqa.
Ngaphambi kokuqala ibhizinisi le-cannabis, kungcono ukufinyelela kummeli ochwepheshe emkhakheni wensangu. Ummeli ogxile e-cannabis uzoxoxa nawe yonke imithetho nemigomo futhi akusize ukufaka isicelo selayisense ngokomthetho. Ezinye izifundazwe zinefasitela lesicelo selayisense elivulekile lapho kunikezwa khona amalayisense amaningi ngasikhathi sinye, kanti amanye anciphisa inani lezicelo zamalayisense futhi adinga ubufakazi bokuthi uyakwazi futhi ukutholakala kwenhloko-dolobha.
Ummeli we-cannabis onelayisense uzokusiza ukuthi usheshise isicelo selayisense nokuvunywa ukuze ibhizinisi lakho lisukume futhi lisebenze ngokushesha okukhulu. Ngaphandle kommeli, nakanjani uzokwenza amaphutha kuhlelo lokusebenza, olungabambezela noma lusebenze inqubo yonke. Ummeli uzokusiza ukuthi uhlangabezane nazo zonke izimfuneko zokulawula ukuze uqinisekise ukuthi ugcina ukuthobela ngokwemigomo yesicelo sakho selayisense.
Ukuthola Izakhiwo Nezindawo Zokuhweba Ngebhizinisi Lezomthetho
Udinga ukuthola indawo engenzeka yebhizinisi lakho elenzelwe insangu futhi etholakala kalula kumakhasimende wakho okuhlosiwe. Ezinye izinto ezithinta indawo yesikhungo sakho zibandakanya izindleko zezindawo zokuhlala kanye nokuba seduze kwezikole, amasonto, kanye nezikhungo zokunakekela izingane zasemini.
Ukuthi ithrafikhi yokudla iyinkinga yakho enkulu noma cha, kufanele futhi uhambisane nezinqubomgomo zakho zasekhaya nezesifunda lapho ukhetha indawo yebhizinisi lakho lensangu. Imithetho eminingi yesigodi ibeka ukuthi noma yiliphi ibhizinisi elihlobene ne-cannabis kumele litholakale cishe yi-1,000 XNUMX ft kude nezikole, izikhungo zokunakekela izingane kanye namasonto.
Ungaqala ukubonisana nabachwepheshe bezimboni ngemikhuba emihle kakhulu lapho utholela indawo ingcebo yebhizinisi lakho elisemthethweni le-cannabis. Uzoqondiswa ekutheni ungayikhetha kanjani indawo efanelekile ukuze ugcine izindleko zebhizinisi lakho ziphansi ngangokunokwenzeka.
ICannabis SAFE Banking Act
Yize kungaphezu kwengxenye yamazwe aseMelika abhalise ngokomthetho futhi alawula ukusetshenziswa kwensangu, amabhange amaningi ayenqikaza insizakalo yokuhlinzeka amabhizinisi agunyaziwe embonini ngokwesaba izinhlawulo zikahulumeni. Ukulinganiselwa kwamabhange e-federal kuphoqelele abanikazi bamabhizinisi e-cannabis ukuthi baphathe ngokuyinhloko emalini ngoba abakwazi ukuvula ama-akhawunti asebhange nezikhungo zezimali ezihanjiswa nguhulumeni.
Ngenhlanhla, le mikhawulo isizophela ngokuvunywa kweSAFE Banking Act eyenziwe ngabaphathi bezomthetho baseCalifornia Senate nabase Illinois. Ngaphansi komthetho, izinyunyana ezikweletini kanye namabhange azimele ayavunyelwa ukuthola i-charter state-injongo yokubasiza ukuba bahlinzeke ngezinsizakalo zokugcina imali ezinhlanganweni zamabhizinisi zensangu ezisebenza ngokusemthethweni. Umthetho omusha wasebhange we-cannabis uzovimba izikhulu zombuso ekutheni zibeke izinhlawulo emabhange akhetha ukwenza imisebenzi esemthethweni ehambisana ne-cannabis (CRBs).
Lo mthetho wasebhange weSecurity and Fair Enforcing (SAFE) uhlose ukuhlinzeka ngetheku elisebenzayo neliphephile ezikhungweni zamabhange ezinenkampani esebenza ngokuhweba namabhizinisi e-cannabis. Umthetho lo, othole ukuvunywa kweqembu elikhulu futhi elihlukile labenzi bezomthetho, uzovimba izinhlaka zombuso ukuthi zikhiphe unswinyo lwamabhange emabhange asebenza namaCRB ezifundazweni lapho insangu isemthethweni ngaphansi komthetho.
Umthetho obizwa ngeSAFE Banking Act, oxhaswe ngabakwa-Ed Perlmutter, uDenny Heck, uWarren Davidson, noSteve Stivers ngokwesekwa komkhakha wamabhange, ufuna ukumisa abalawuli bamabhange enhlangano ukuthi basongele uhlelo lwebhange lendabuko ngoba ababambeli babo kungama-CRB. Ifuna futhi ukuvikela abasebenzi basebhange ezimweni zokushushiswa kombuso lapho besebenza namabhizinisi e-cannabis.
Umthetho omusha futhi uvimbela noma yimuphi umzamo wombuso wokuphoqa isikhungo samabhange ukuthi siyeke ukuhlinzeka ngezinsizakalo zokubeka ku-CRB, sinciphise umshwalense waso ngokuhlinzeka nge-CRB, sinikeze isikweletu esenziwe kwi-CRB, noma sithathe noma yisiphi isenzo esibonakala sinobandlululo embusweni lapho insangu isemthethweni.
Ukudalwa kwaleli chweba elivikelekile kuzovikela amabhange endabuko kunoma yiluphi uhlobo lokuphindisela okulawulayo kubaqondisi bamabhange ezimali. Umthetho webhange leSAFE uyavuma amandla ohlelo lwamabhange wendabuko ukusebenzela lo mkhakha ngokugcwele, yingakho singekho isidingo sokuthi umbuso usungule ezinye izinyunyana ezikweletelana nabakwa-CRBs.
Siyinkampani yezomthetho esebenza ngokugcwele esezinze ePeoria, e-Illinois. Igama lami ngingu-Attorney uThomas Howard. Ngineqembu labameli abanolwazi, abanethalente nabazinikele abahlinzeka ngezeluleko zomthetho eziphelele kumakhasimende embonini ye-cannabis. Ngokubambisana nethimba lami, singakusiza ukuthi uqale, uphathe, futhi uvikele ibhizinisi lakho le-cannabis, amalayisense wombuso avikelekile nezimvume zikamasipala, uthole indawo efanelekile yokwenzela ibhizinisi lakho insangu, futhi unikeze nomthelela ezikhungweni zokugcina imali ukunikela ngezinsizakalo zebhange ngebhizinisi lakho elihlobene ne-cannis. .
Siyaqonda ukuthi ukusetha ibhizinisi elihlobene ne-cannabis kudinga ukuqonda okujulile kwemithetho yezomthetho eyinkimbinkimbi ebandakanyeka kulo mkhakha. Imigomo ye-Federal elawula ukutshalwa, ukutholakala, kanye nokusatshalaliswa kwensangu ingashintsha. Ngalesi sizathu, inhloso yethu ukusiza osomabhizinisi ukuqala ibhizinisi elichumayo embonini yezokwelapha i-cannabis yezokwelapha.
Siyaziqhenya ngabameli bebhizinisi lethu lensangu abanekhono, abajwayelene ngokuphelele nemithetho yenhlangano, yezwe, neyasekhaya elawula lolu hlobo lwebhizinisi. Sifuna ukukusiza ukuthi uhlale ungaphezulu kwalo mkhakha ovela njalo ngokuqhubeka u-100% uhambisana nayo yonke imithetho etholakalayo. Silangazelele ukwenza isiqiniseko sokuthi uqonda yonke imithetho esebenza esimweni sakho ukuze ibhizinisi lakho liphumelele.
Thintana nabameli bethu abasekelwe e-Illinois namuhla ukuhlela ukubonisana. Silapha ukuvikela ibhizinisi lakho lokuqothula insangu zonke izinyathelo zendlela.